လက်ပေါက် ပိတ်တာနဲ့ ကျဲတာက ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ ဘာတွေကွာခြားနိုင်လဲ…. – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > လက်ပေါက် ပိတ်တာနဲ့ ကျဲတာက ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ ဘာတွေကွာခြားနိုင်လဲ….
အချို့က ကျဲရင် ငွေယိုတယ်၊ မမြဲဘူး။ ပိတ်မှ မြဲမယ် လို့ ပြောကြတယ်။ ငွေတစ်ခုထဲတော့ ကွက်ဆိုလို့ မရဘူး။ သဘောတရားကို ချုံငုံမိရင် အဆင်ပြေ ပါတယ်
ကျဲတာက ဆင်ခြင်ဉာဏ် အားကောင်းတာ၊ လွတ်လပ်မှု လိုလားတာ၊ သံသယ စိတ်များတာ၊ဖြစ်သလို နေတတ်တာ ။ တန်ဖိုးထားမှုက ရုပ်ဝတ္ထုထက် နာမ်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ တွေ ဖြစ်နေတတ်တာ။ ဥပမာ မေတ္တာ၊ သစ္စာ၊ ချစ်ခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း စတဲ့ ခံစားမှုတွေ အပေါ် တန်ဖိုးထားတာ။
ဒါကြောင့်လည်း ငွေမမြဲတာ လို့ ချိပ်ဆက်ပြောရမယ် ထင်တယ်
ပိတ်တာက လွှမ်းမိုးချင်တာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တာ၊ ကိုယ့်အိမ်ဘေးမှာ ဘယ်သူနေမှန်းပင် မသိတာ။ တနည်းဖြင့် ကိုယ် အာရုံ စူးစိုက်ရာကိုသာ ဦးစားပေး နေတတ်တာ။ ဇိမ်ခံချင်တာ။ အစား ရွေးတာ။ ကိုယ့် စိတ်ကြိုက် ကိုယ်လုပ်နေတော့
ပတ်ဝန်းကျင် အမြင်မှာ မိမိက တကိုယ်ကောင်း ဆန်သူပင် ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုလည်း မက်မော နေတတ်ပါတယ်။အစွန်းရောက် သွားနိုင်တာက ကျဲသူဟာ စိတ် ဂနာမငြိမ်၊
ပူပင်မှုများ၊ သံသယများတာ မျိုး ရှိတယ်။ ပိတ်တာက အတ္တကြီးတာ၊ တပါးသူ ခံစားချက်ကို နားလည်မပေးတာ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်ရာပဲ ကိုယ်သိတာ စတဲအနေအထား မျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
Credit – လက်ခဏာဗေဒ
Previous Article အသည်းလေး တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး ဒီတစ်လအတွင်းကြုံရမယ့် သင့်အတွက် အချစ်ရေးအခြေအနေကို ပြောပြမယ်
Next Article သီလရှင်ဝတ်ခြင်းအကျိုး